zimbabwe Archives - FiloPost
A student at the Midlands State Unniversity, Zimbabwe, identified as Prince Danda, was arrested for stealing panties belonging to female students from the washing lines. Prince was arrested after two female students reported the...
A pastor in Zimbabwe, has been caught, pants down, with a member of his assembly – Joseph Ponda, the pastor of AFM Church, Tynwald in Dzivarasekwa was attacked by passersby who caught the two...
A minister stopped a wedding taking place in Zimbabwe because of the seductive way a bridesmaid and groomsman were dancing during the ceremony. The wedding between Emmerson and Yvonne was underway and it was...
President Emmerson Mnangagwa has been announced as winner of Zimbabwe’s July 30 presidential elections. The 75 year-old leader polled 50.8 per cent of votes as against 44.3 per cent polled by his closest challenger...
A Zimbabwean couple have been arrested after the wife lured a 14-year-old neighbour with goodies so her husband could rape the girl. Mufaro Mukonowatsauka, 46, is accused of wooing the teenage girl for her...
Samuel Undenge, a former Energy Minister who served under Zimbabwe’s ex President Robert Mugabe was found guilty of corruption and sentenced to four years in jail today. His lawyer said that this is the first conviction...
A Zimbabwean man, Joseph Chirunga, 43, has been charged to court for driving away from a fuel station without paying, after filling a container he was carrying with 1,000 litres of diesel. Prosecutor Linda...
Minister lost one of her breast in bomb blast
Zimbabwe’s Minister of Environment, Climate and Water, Ms Oppah Muchinguri-Kashiri, has lost one of her breasts after the bomb blast that rocked the campaign rally of President Emmerson Mnangagwa last Saturday. Muchinguri-Kashiri, who is...